Hery - Tsiky dia ampy | Mey 2007
Namana version 5...
2007-05-29 @ 16:04 in Serasera.org
Tsy dia mahafa-po ny endriky ny namana kinova faha 5 (tsy ratsy koa ilay hoe kinova noho ny tao). Ho hita eo ny hanavaozana ny endriny.
Fa ankoatry ny endriny dia novaina ny rafitra anatiny, indrindra ny resaka angona (base de données). Misaraka tsikelikely amin'ny serasera amin'ny ankapobeny ny takelaka namana.serasera.org. Raha sendra mavesatra tampoka izy amin'izao dia mora ny mamindra azy ho serveur iray manokana.
Lazaiko tsikelikely etsy ambany ny fanovana.
Avy amin'ny endriky ny malagasy.it sy ny katolika.org ary radiovazogasy.com no nakàna ny endrika. Ny tanjona dia ny fahafahana manova ny endrika amin'ny fomba tsotra (CSS ovaina fotsiny sisa)
Solaitra kinova farany
Mampiasa ny solaitra kinova farany (rev. 498) ny takelaka namana.serasera.org amin'izao fotoana izao. Moramora kokoa noho izany ny manavao azy isaky ny misy fiovana ao amin'ny fototry ny solaitra
Mitovy firindra amin'ny takelaka serasera hafa
Koa satria efa mitovy ny fitaovana fototra ampiasaina dia tsy misy olana intsony eo amin'ny fifampizarana session. Rehefa identifié amin'ny forum ohatra dia identifié ao amin'ny namana koa fa tsy voatery mampiditra tenimiafina intsony.
Miantehitra amin'ny webservice
Hiantehitra amin'ny webservice (SOAP sy REST) mba hahafahana mametraka ny site iray amin'ny serveur maromaro raha sendra be loatra ny mpampiasa.